Dayax gacmeedka Itoobiya ay hawada sare u dirtay waxtar noocee ayuu u leeyahay? - BBC News Somali
Dayax gacmeedka Itoobiya xilliga xaruun ku taallo China laga dirayey
Dayax gacmeedka Itoobiya ay hawada sare u dirtay ee loogu magac daray Ethiopian Remote Sensing Satellite - 01 (ETRSS - 01) waxaa sameeyey dalka Shiinaha walow ay khubaro dalka Itoobiya ka soo jeedo ay door weyn ku lahaayeen.
Miisaanka dayax gacmeedka ETRSS - 01 waxaa lagu sheegay inuu yahay 70 kiilo.
Inkasta oo waddamada soo koraya oo ay Itoobiya ka midka tahay baahida loo qabo daraasaadka hawada sare iney aad u yartahay la sheego haddana Dr Solomon wuxuu leeyahay "Cilmi baadhista hawada sare Itoobiya iyo waddamada la midka ah iney aad muhim ugu tahay oo ay ahayn wax faakiheysi ah oo aan loo baahneen".
"Wuxuuna dayax gacmeedka noocan ah uu gacan ka geysanayaa in si fudud loo ogaado dhulka ku wanaagsan wax soosaarka beeraha iyo kan aan ku wanaagsaneyn, dhulka biyaha laga helo iyo in si fudud loo helo xog dhammeystiran oo ciidda ku saabsan" ayuu yiri Dr Solomon.
"Haddii loo baahdo in dadka ku nool dalka tirakoob lagu sameeyana halka la adeegsan lahaa hababki hore in dayax gacmeed la adeegsado ay aad uga wanaagsan tahay"
Xigashada Sawirka, ZACHARIAS ABUBEKER
"Sida caadiga ahna waxaa dayax gacmeedka loo isticmaalaa dhaqdhaqaaqyada nabadeed oo looma adeegsado dagaallada iyo hubka in lagu hagi" ayuu yiri.
"Dayax gacmeedka ay Itoobiya hawada sare u dirtay waxay qayb ka tahay guulaha ay daraasaadka hawada sare ee ay Itoobiya wadday ka gaartay" ayuu yiri Dr Solomon.